Shiinaha Dengue Kit Kit Degdeg ah iyo alaab-qeybiyeyaal. Kibir
Tijaabada degdega ah ee Dengue IgG / IgM waa tallaal socod dhinac ah ah oo lagu ogaanayo isla markaana lagu kala duwanaanayo fayraska IgG anti-dengue iyo IgM anti-dengue virus ee ku jira serum-ka ama plasma-ka. Waxaa loogu talagalay inay u isticmaalaan xirfadlayaashu tijaabada baaritaanka iyo caawinta baaritaanka infekshinka fayraska dengue. Muunad kasta oo falcelin leh oo la socota Dengue IgG / IgM Rapid Test waa in lagu xaqiijiyaa hab kale oo tijaabooyin ah.
Fayrasyada Dengue, qoys ka kooban afar nooc oo kala duwan oo fayrasyo ​​ah (Den 1,2,3,4), waa hal-feylayaan, la daboolay, oo leh feyrasyo ​​macquul ah oo RNA ah. Fayrasyada waxaa gudbiya kaneecada qaniinyada maalinlaha ah ee Stegemyia, gaar ahaan Aedes aegypti, iyo Aedes albopictus.
2. 25 x 5 µL daadiyeyaal yaryar.
3. Muunad Muun (2 dhalo, 5 ml).
Magaca badeecada: Dengue igg / igm Qalabka Baaritaanka Degdegga ah
Magaca Summada: WAQTIGA DAHABKA
Habka: Dahab dahab ah
Tijaabada: dhiigga oo dhan / serum, ama tijaabada dhiigga
Xirxirida: 25 imtixaan / sanduuq
Waqtiga Akhriska: 25mins
Hore: Mashiinka Tijaabada ugxanta 'LH'
Xiga: Xanuunka Ifilada AB Fudud
Talaabada 1: Keen shaybaarka iyo qaybaha tijaabada heerkulka qolka haddii la qaboojiyey ama la qaboojiyey. Si fiican isugu qas tijaabada ka hor baaritaanka markii la dhalaaliyo.
Tallaabada 2: Markaad diyaar u tahay inaad tijaabiso, ka fur boorsada qafiska oo qalabka ka saar. Dhig qalabka tijaabada dusha sare oo nadiif ah.
Tilaabada 4: Ku buuxi wadaha yar yar shaybaarka muunada ah si uusan uga badin laynka muunada sida ku cad sawirka soo socda. Muga muunada waa kudhowaad 5µL.
Ogeysiis: Ku tababar dhowr jeer baaritaanka haddii aadan aqoon u lahayn daaqada yar yar. Si saxan ufiican, muunad ku wareeji tuubo awood u leh inaad bixiso 5µL mug ah.
Adiga oo haya dahaarka yar toosan, tijaabada oo dhan ku daadi bartanka muunada si fiican (S well) adoo hubinaya inaysan jirin goobooyin hawo ah.
Kadib kudar 2-3drops (qiyaastii 60-100 µL) oo Sample Diluent isla markaaba ku dar ceelka keydka (B well). 5µL oo tijaabada ah oo si fiican loo yaqaan 'S' 2-3 dhibcood oo ah muunad milix leh oo si fiican B ugu jirta.
Talaabada 5: Samee saacad.
Tallaabada 6: Ku aqri natiijada 25 daqiiqo.
Ha aqrin natiijada 25 daqiiqo kadib. Si looga fogaado jahwareerka, iska tuur qalabka baaritaanka ka dib markaad tarjunto natiijada.
NATIIJOOYINKA SAAMAYNTA AH: Haddii kaliya kooxda C ay jirto, maqnaanshaha midab burgundy ah oo ka tirsan labada qaybood ee baaritaanka (G iyo M) waxay muujineysaa in aan la helin unugyada difaaca jirka ee fayraska. Natiijadu waa mid taban ama aan falcelin lahayn.
NATIIJO CAADI AH
2.1 Marka lagu daro joogitaanka kooxda C, haddii kaliya la sameeyo unugga G, waxay muujineysaa jiritaanka IgG anti-dengue virus; natiijadu waxay soo jeedinaysaa infekshin hore ama dib-u-qaadsiin fayraska dengue.
2.2 Marka lagu daro jiritaanka kooxda C, haddii kaliya la sameeyo M band, baaritaanku wuxuu muujinayaa jiritaanka fayraska IgM anti-dengue. Natiijadu waxay soo jeedineysaa infekshan cusub oo fayraska dengue ah.
2.3 Marka lagu daro joogitaanka kooxda C, labada koox ee G iyo M waa la sameeyay, waxay muujineysaa jiritaanka IgG iyo IgM anti-dengue virus. Natiijadan ayaa waxa ay soo jeedisay cudurka hadda ama caabuq of virus dengue.
Muunado leh natiijooyin wax ku ool ah waa in lagu xaqiijiyaa hababka kale ee tijaabooyinka iyo natiijooyinka caafimaad ka hor inta aan go'aan wanaagsan la sameyn.
INVALID: Haddii aan la samayn kooxda 'C band', tijaabinta ayaa ah mid aan ansax ahayn iyada oo aan loo eegin midab buluug ah.